Koox MSF ah oo Xeebta Yaman ka heley Meydadka 35 Soomaali iyo Itoobiyaan ah - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Nayroobi, 23 Abriil, 2009 —Koox wareegta oo Médecins Sans Frontières (MSF) ka tirsan ayaa maydadka 35 qof oo Soomaali iyo Itoobiyaan ah ka heley xeebta Yaman habeenkii ay bisha Abriil ahayd 22ka. Meydadkan waxa ay ka mid ahaayeen koox laba maalmood ka hor ka soo baxay dekadda Boosaaso, Soomaaliya, iyaga oo ka soo cararaya nabadgelyo-xumada ama saboolnimada ba’an iyaga oo soo raacay dooni ay leeyihiin tahriibiyeyaal. Waxa ay ku safrayeen xaalado aad u xun iyaga oo ka soo gudbaya Gacanka Cadan si ay u soo gaaraan Yaman.
Kuwii ka soo badbaadey ee soo gaarey xeebta gobolka Abyan ayaa kooxda MSF u sheegey in, sababo aan caddeyn daraadood, ay doonidii u degtey markii ay bilowdey in ay u soo dhowaato xeebta waqti habeenimo ah. Qaxooti badan ayaa ku safrayey godadka mugdiga ah, ee aan hawada lahayn ee doonta, ee loogu talogaley in lagu keydiyo kalluunka.
Markii ay kooxda MSF ay soo gaareen goobta, waxa ay arkeen doonida degtey, waxaana iyaga oo gacan ka helaya dadka degaanka, waxa ay awood u yeesheen in ay saddex haween ah ka soo badbaadiyaan godka doonida. Nasiib-darrose kuwii kale ee ku xayirmey godka waa ay qaraqmeen; kuwo kale oo badan ayaa iyana ku qaraqmey markii ay doonidu degtey.
Tirada dadka dhintey ee ilaa hadda aan hayno waa 35 qof, laakiin waxaa laga yaabaa in ay kuwo kale maqan yihiin.
Dadka soo badbaadey ayaa MSF u sheegey in intii ay ku soo jireen safarka, ay joojiyaan burcadbadeed hubeysan oo Soomaali ah oo ugu hanjabay in ay ka dhici doonaan waxa ay wataan ayna ku ridi doonaan badda, laakiin waa ay ka soo badbaadeen markii ay burcad-badeeddu ay wada hadleen tahriibiyeyaasha.
Abriil 10keeda, ayaa dad lagu qiyaasey 76 qof oo tahriibiyeyaashii wadey ay ku khasbeen in ay ku boodaan meel bad-weynta ah oo ka fog xeebta Yaman. Maalintii xigtey, 16 mayd ayaa ku soo caariyey xeebta Melha, oo ilaa 18 mayl u jirta magaalada Axwar, ee ay UNHCR ay ku leedahay xarun ay qaxootiga ku qaabisho halkaas oo MSF ay daryeel caafimaad iyo mid maskaxda/dhimmirka ah ku bixiso. Kuwo badan oo ka mid ah dadkii saarnaa doonida ayaa weli la la’ yahay; MSF waxa ay gargaartey 48 qof oo soo badbaadey.
Sheekooyinka noocan ah ayaa ku badan degaanka. Soomaaliya iyo Itoobiyaanka ka soo cararaya dagaalka iyo saboolnimada ba’an waxa ay sheegaan in aaney u furneyn wax aan ahayn in ay soo galaan safarkan halista badan. Dadkan ayaa waddada ku soo jira laba maalmood iyaga oo saaran doonyo dhererkoodu yahay 26 – 32 fuut/cagood oo wada 100 ilaa 120 qof. Inta ay safarka ku soo jiraan caadi ahaan lama siiyo wax cunto ama biyo ah mana loo oggolaado in ay dhaqdhaqaaqaan. Dadkan ayaa la geliyaa godadka doonta halkaas oo ay mararka qaar ugu dhintaan neef-qabatin. Tirada dadka ku dhinta saffaradan waa mid aad u sarreysa: ilaa bishii Sebtembar 2008dii ugu yaraan 338 qof ayaa meydadkooda laga heley xeebta gobolka Abyan, kuwaas oo aan lagu darin tirada aan la garaneyn ee meydadka ay aaseen kalluumeysato ama qaxootigii ay wada socdeen.
Tags: Axwar, doon, meedad, tahriib, xeeb, Yemen